एमाले ले गर्ने आमसभा को पूर्वसन्ध्यामा मधेशवादी द्धारा एमाले विदाई कार्यक्रम |Websoft IT Nepal Pvt. Ltd.| Radio Nagarik 100.4 Mhz Halloween Costume ideas 2015
आज दुर्गाको प्रतिमामा आँखाको नानी थपिने
जनकपुरधाम , २२ असोज । मिथिलाञ्चलका दुर्गा मन्दिरमा आज दुर्गाको प्रतिमामा आँखाको नानी थपिने विधि रहेको छ । मिथिलाञ्चलम...
कुशवाहा कल्याण समाजको केन्द्रीय अध्यक्षमा तपेश्वर महतो
महोत्तरी, ३० असोज । नेपाल कुशवाहा कल्याण समाजको केन्द्रीय अध्यक्षमा तपेश्वर महतो चयन हुनुभएको छ । धनुषाको ढल्केवरमा आज सम्पन्न समाजको ...
दसैँका नाममा पशुबलि दिने हिंसात्मक परम्पराको अन्त्यगर्नु पर्ने
काठमाडौँ , २० असोज । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले दसैँका नाममा पशुबलि दिने हिंसात्मक परम्पराको अन्त्य गर्न आग्रह गरे...
ध्यानपुर्वक दुईपटक पढ्नुहोस । जिन्दगीको दिमाग हल्लाइदिने खालको सत्य !!
ध्यानपुर्वक दुईपटक पढ्नुहोस । जिन्दगीको दिमाग हल्लाइदिने खालको सत्य !! जुनदिन हाम्रो मृत्यु हुन्छ , हाम्रो पैसा बैंकमा नै रहन्छ । ...
kishor sangam diyali
bignews पूर्वाञ्चल खबर राजनीति
हरिनगरा, २४ पुस । नेकपा एमालेले सुनसरीको दक्षिणी गाविस हरिनगरामा भोली गर्ने आमसभा र शक्ति प्रर्दशनलाई लक्षित गरी मधेशी दल आवद्ध स्थानीयहरुले आज साँझ विरोध प्रर्दशन गरेका छन् ।
एमालेले गर्न लागेको सभाको पूर्वसन्ध्यामा विभिन्न मधेशवादी दल आवद्ध स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरुले विरोध जनाएका हुन् । उनिहरुले मसाल जुलुस सहित बजार क्षेत्रमा नाराबाजी समेत गरेका छन् । कार्यक्रम स्थललाई लक्षित गरी हरिनगरा बजार क्षेत्रमा नारा जुलुस सहित एमाले विरोधी प्रर्दशन गरिएको थियो । एमालेलाई मधेश नचाहिएकाले मधेशबाट एमाले बिदाई कार्यक्रम आयोजना गर्नु परेको विरोध कार्यक्रममा सहभागिहरुको भनाई छ । एमालेले आयोजना गर्न लागेको सभालाई सम्बोधन गर्न पूर्व प्रधानमंत्री तथा पाटीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल भोलि हरिनगरा पुग्ने कार्यतालिका रहेको छ ।
एमालेको कार्यक्रमलाई लक्षित गरी सो क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था आजैबाट कडा पारिएको छ ।
मोर्चा आवद्ध नेता तथा कार्यकताले कार्यक्रमलाई लक्षित गरी अवरोध पुर्याउन सक्नै भन्दै प्रहरी तैनाथी बढाइएको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ । मधेशवादी दलहरुले हरिनगरामा एमालेले गर्न लागेको सभामा पार्टीगत विरोधको निर्णय नभएको भन्दै सर्वसाधारण स्वतस्फूर्त विरोधमा उत्रिएको बताएका छन ।
Labels: bignews पूर्वाञ्चल खबर राजनीति